Fomba hanatsarana ny fahombiazan'ny tetikasa amin'ny fampiasana ny tetikasa Project Manager - ITS
Mpitantana ny tetikasa:Ny lohahevitra momba ny fomba fitantanana mpandraharaha (PM) miasa ao amin'ny rafitra azo antoka na raki-tsoratry ny rafitra mpanatontosana dia manangona mpiara-miasa mba hanontaniana amin'ny ankapobeny ny kilasy fitantanam-panjakana rehetra efa nampianarina ahy.
Ny asan'ny ankamaroan'ny fikambanana dia tanterahina amin'ny sehatry ny tambajotram-pampiasam-pahalalana ampiasain'ny mpampiasa, na ny fiovaovan'ny rafitra. Midika izany fa manitatra ny mpiara-miasa amin'ny talen'ny filaminana mahomby izay mifehy ny andraikiny, fanadinana, fananganana, valisoa, sy ny sisa. Hatreto, PMs tsy dia nitondra anjara biriky tamin'ny iray tamin'ireo fomba fiasa ireo.
Ny soso-kevitro voalohany PMIreo izay miaina ao anatin'io toe-javatra io dia ny fanadihadiana ny tanjon'ny Project Management Institute (PMI) momba ny manam-pahaizana manokana momba ny PM. Ity dia hita ao amin'ny pejy 283 sy 284 ao amin'ny Guide to the Fitantanana ny tetik'asa ho an'ny fahalalana (PMBOK® Guide)- Fahaefatra fahadimy. The PMBOK® Ny torolàlana dia manolotra fa ny PMs dia mampiasa singa manokana, manokana, ary fampandraisana anjara amin'ny fifandraisana amin'ny mpiara-miasa ary manara-maso ny mpiara-miasa. salantsalany izay dia manoro hevitra ny PMs hanasazy fahaiza-manao telo na ampahany amin'ny fanatanterahana:
3 Manam-pahaizana momba ny tetikasa hanatsarana ny fahombiazan'ny tetikasa
1. Aoka ho mpisava lalana
2. Aoka ianao handresy lahatra
3. Aoka ho lohalaharana
Fiantraikany sosialy - Ny PMs dia afaka mitarika ny fihetseham-pon'ny mpiara-belona, ​​ny fehiny ary ny fitondran-tenany. Ny PMs dia afaka mampiasa ny fiantraikany ara-tsosialy avy amin'ny fomba fijery maro, ohatra, ny fifamatorana, ny fifaneraserana, ny lanjany, ny andraikitra ary ny fiantraikany amin'ny fiantraikan'ny mpiara-miasa.
Mamorona nofy - Ny PMs dia tokony hanana fahafahana hahita vokatra farany. Ny PMs dia tsy afaka manome tari-dalana momba ny fiasan-drivotra raha tsy mahafantatra ny tanjona manokana.
Asio fampisehoana - Ny PM dia afaka maneho amin'ny fomba mazava sy mazava tsara ny toerana alehan'ny vondrona ary manome torolàlana amin'ny fomba mahomby indrindra hahatongavana.
Rouse - Ny PM dia mila mandroso. Ireo mpiasa mpiara-miasa dia afaka maka vondrona kely, ohatra, ny fanaovana olona dia mila manao zavatra, mameno ny olona manana fironana hahazo zavatra ary manome hevitra momba ny fanatanterahana zavatra.
Mentor / Motivate - Ny PMs dia afaka manoro hevitra sy mitaona ny hafa. Afaka manome fiofanana na fandrosoana izy ireo mba hiahiahy ny mpiara-miasa amin'ny fanohanana azy ireo amin'ny fanatanterahana tanjona tratrarina. Afaka mizara fihaonana izy ireo, manolotra fanentanana, manome torolalana ary mizara ny fahaizany.
Fanampiana sy fanamafisana ny hafa - Ny PM dia tsy maintsy manome fanampiana sy fanohanana amin'ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny mpiara-mianatra amin'ny tanjon'izy ireo mba hanatanterahana tanjona tratrarina. Izany dia mandefa ny hafatra fa ny fanatanterahana ny valim-pifanarahana dia tsy maintsy manam-pahaizana amin'ny fiaraha-miasa. Manamafy ny mpiara-miasa ny PMs, ary toy izany, manitatra ireo mpiara-miasa aminy.
Mitadiava tanjona iombonana - PMs mametraka tanjona azo trandrahana ary manana vokatra faran'ny farany. Ireo tanjona dia afaka manana tanjona iray farafaharatsiny azo tanterahina mandritra ny fotoana voafetra. Manome fahatsapana toerana iray ny mpiara-miasa aminy.
Mifehy sy mandrindra ny hafa - PMs mitarika ny vondrona amin'ny fanomezana tari-dalana, fandraisana andraikitra ary fanentanana. Ny PMs dia miseho sy manazava hoe inona, rahoviana, aiza ary ahoana.
Aoka handresy lahatra - PMs dia afaka mandresy lahatra. Io fomba fanao io dia ampiasaina hanovana ny toe-tsain'ny saina amin'ny fotoana iray amin'ny fampiasana ny teny noforonina na nitenenana ary tokony ho azo atao ny mandalo ny angona, ny fihetseham-po, ny fisainana na ny fofon'ireny.
Zavatra tsy ampy / Ny PM dia tokony haneho hevitra amin'ny ankapobeny, mazava sy azo ampiasaina amin'ny teny tsotra.
Ampiasao ny fifantohana amin'ny ankapobeny - Ny PM dia tokony hifantoka tanteraka amin'ny zavatra lazaina fa tsy mifanohitra amin'ny hoe "mihaino" ny hafatry ny mpandahateny. Amin'ny alalan'ny fifantohana, ny PM dia hahazo ny lanjan'ny fifanakalozan-kevitra. Izany dia azo ampiasaina hanehoana ny fanajàna ny mpandahateny, izay hanampy amin'ny fitomboan'ny fifandraisana amin'ny mpiara-miasa aminy.
Fahamarinana / Fijerena ny toerana samihafa - Ny PMs dia tsy maintsy misaina tsara ary manome hevitra tsara mba hifantohana amin'ny mpiara-miasa hafa. Amin'ny fanatanterahana izany dia manitatra ny vondrona ny PM amin'ny alàlan'ny fandefasana ny hafatra fa heveriny ny fehin-kevitry ny mpiara-miasa sy ny vaovao.
Adikao fotsiny ny olana tsy maintsy atao - Ny PMs dia tokony hampiasa ny fahaizan'izy ireo hamantatra ny fifanoheran'ny olana manan-danja amin'ny resaka tsy misy ilana azy. Rehefa mahita an'io fahaiza-manao io ny vondrona mpandraharaha dia manorina ny fijeriny sy ny fanajany ny PM izy ireo.
Mandraisa anjara - PMs dia hifanerasera amin'ireo rehetra mpiara-miasa aminy. Ny PMs dia tokony hampiasa ny fahafaha-manaony mba hahazoana fifanarahana amin'ny olona avy amin'ny fomba fijery hafa mba hikasika ny fototra amin'ny fahatakarana.
Raiso ireto dingana valo ireto mba hiorina amin'ny safidinao indrindra:
Manavaka sy manazava ilay olana.
Apetaho ny làlan'ilay olana ary atsipazo ao anaty sombintsombiny.
Mametraha fanontaniana, manangona tahiry ary manova azy ho data.
Mametraha / manangona / manangona / manaparitaka angon-drakitra ary ampiasao izany amim-pahombiazana.
Diniho sy ampiasao ny fomba fijerin'ny horita mba hanapahana ny fomba fanao tsara indrindra hamaritana ny olana, toy ny hoe tsy fotoana tsy ilaina ny fotoana sy ny fananana.
Mifidiana raha toa ka angon-drakitra fanampiny dia hanampy ny fandaharana.
Diniho ny ankamaroan'ny safidy; Mifidiana ny iray izay saika mandrindra ny fandaminana tonga lafatra.
Manaova ny safidy; Jereo tsara ny fomba nandaminana ilay olana.
Ny fampiasana ny fifangaroana amin'ny fitantanana, ny fiantraikany sy ny fahaiza-mitarika amin'ny fifandraisana amin'ny hafa dia hanatsara ny tanjaky ny mpandraharaha amin'ny fanatanterahana ny vondrona. Raha vao mahita mpiara-miasa ny mpikaroka amin'ny fampiasana ny tatitra rehetra, ny fanehoan-kevitra sy ny fomba tsotra, ny fiheverana sy ny fividianana izany ho an'ny ampahany sy ny firoboroboana dia hampitombo.
Andro iraisampirenena iray - Izao no fotoana tokony handraisana ny fiantohana